Usoro Sale - Foshan Xinxingye Glass Co., Ltd.
- Facilities & Ike
- Okwu nke Sale
- Were n'Ọrụ Care
1. enye na nnabata. All ahịa nke ngwaahịa site Focus Safety Glass ( "FSG") na Ahịa bụ isiokwu ndị a Okwu-Sale ma e wezụga dị ma expressly kwetara na a dere akwụkwọ aka site FSG. Nke a akwụkwọ, na ndị ọzọ na akwụkwọ kwetara na a dere akwụkwọ aka site FSG, haa dum nkwekọrịta nke ọzọ na ndị ọzọ nile na usoro na ọnọdụ na-expressly jụrụ. Ọ bụrụ na akwụkwọ a bụ akụkụ nke ọ bụ webatara site akwụkwọ n'ime a FSG sales nkwekọrịta, price list, akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ ndị ọzọ akwụkwọ, ọ dere dum nkwekọrịta nke FSG na Ahịa. Ahịa si nabata ngwaahịa Ẹnam ekese site FSG ga-emekwa nabata site ahịa nke niile nke usoro na ọnọdụ kwuru na akwụkwọ a. Ọ dịghị ndị ọzọ nkwekọrịta, na nkwupụta ma ọ bụ nkwa mere FSG ma ọ bụ chọrọ site Ahịa metụtara ndị ire nke ngwaahịa site FSG ka Ahịa na-adịghị na dere na-aka site FSG na-ekechikwa on FSG.
Ọ bụrụ na akwụkwọ a bụ a akụkụ nke ọ bụ webatara site akwụkwọ n'ime ihe Acknowledgement nke a zuo iji ma ọ bụ ndị ọzọ akwụkwọ, mgbe ahụ akwụkwọ a bụ a jụrụ ajụ nke ọ bụla na-enye mere Ahịa na bụ ihe na-enye site FSG ere ka Ahịa ngwaahịa mata na price (s) gosiri, n'okpuru usoro na ọnọdụ kwuru na akwụkwọ a. Ahịa si Ịzụ wee bụ isiokwu usoro na ọnọdụ kwuru na akwụkwọ a na ndị a kwuru, sị usoro na ọnọdụ supersede na-eji dochie ihe ọ bụla na niile usoro na ọnọdụ nke ndị ahịa si Ịzụ wee. FSG si Acknowledgement na-expressly oyi na ahịa si ekwenye ka usoro na ọnọdụ kwuru na akwụkwọ a na ndị dị otú ahụ ekwenye ga-e weere nye ma FSG ekweta Kama na a dere akwụkwọ aka site FSG. Ọ dịghị odida nke FSG ka jụrụ ọ bụla usoro na ọnọdụ dị na bụla nkwurịta okwu si Ahịa ma ọ bụ Mbupu nke ngwaahịa site a FSG ga-weere dị ka a waiver nke usoro na ọnọdụ kwuru na akwụkwọ a ma ọ bụ ihe nke ọ bụla dị otú ahụ usoro na ọnọdụ.
2. Usoro na ọnọdụ. Ọ bụla FSG kwuru na-oyi na Asịwo ikweta na ndị a FSG okwu nke ire ere. Asịwo agēke site ndị a okwu nke na-ere na-enweghị mgbanwe, gwụla ma ma weputara na dere na nabatara ede site FSG. Ọ bụla usoro na ọnọdụ n'ebe ọ bụla ọzọ, gụnyere ma na ọnweghị oke, Asịwo si zuo iwu ma ọ bụ Nkweta, na e weere na-ekwe. A okwu nke na-ere ga-ịchịkwa na iri ụzọ karịa ihe ọ bụla iche iche usoro na ọnọdụ na ihe ọ bụla ọzọ akwụkwọ. Otu "Order" ma ọ bụ "Ịzụ Order" pụtara Asịwo si zuo iji ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iji ma ọ bụ nkwekọrịta ụdị nabatara FSG ide.
3. ngwongwo Akwanyere. FSG ekweta tinye naanị nke ukwu na ụdị ibu kọwara na FSG Order nkwenye, Pro Forma ma ọ bụ e kwuru, nke nwere ike ịbụ ịdị iche iche site na oru ngo atụmatụ, nkọwa, na / ma ọ bụ Asịwo nke Ịzụ wee (s). FSG agaghi-aghaghị ịdị na-eme mgbanwe ma ọ bụ mgbakwunye ngwongwo kọwara na FSG Order nkwenye, Pro forma ma ọ bụ e kwuru ma ọ bụrụ na FSG ekweta ide na, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ihe equitable ukpụhọde e mere ka ndị price na nnyefe okwu. Gwụla ma ma kwetara ede site FSG, niile ngwongwo ọnọ site FSG n'okpuru ihe Order, gụnyere ndị na-emepụta izute kpọmkwem nkọwapụta, ga-n'okpuru tolerances na ọdịiche na-agbanwe agbanwe na ojiji nke ahia, mgbe FSG n'ichepụta omume ma ọ bụ ndị bara uru ule na nnyocha ụzọ. Dị otú ahụ tolerances na ọdịiche agaghi ike ọ bụla iche iche FSG warranties.
4. Ahịa. FSG ga-agbụ e dere price ruturu ọ na-eme na-kwuru na ọ bụ "ike" dị ka ha okwu. Gwụla ma ma kwuru na ọdabara nkwekọrịta akwụkwọ aka site FSG, niile FSG si bipụtara ahịa na ego, ma ọ bụrụ na ọ bụla, bụ isiokwu ịgbanwe site FSG. Na omume FSG agbanwe ya ahịa, ego nke ngwaahịa n'okpuru akwụkwọ a ma Ẹnam ekese ga-price na utịp ke ụbọchị FSG natara ngwaahịa iji nyere FSG-anabata ka ede, ma e wezụga na ọ bụrụ na FSG ekweta ka oge na rụpụta, mmepụta ma ọ bụ nnyefe nke ọ bụla na ngwaahịa n'elu ahịa arịrịọ ahụ, na FSG si nhọrọ, ndị ahịa nke ndị dị otú ahụ na ngwaahịa ga-abụ ndị a pụrụ isi kwuo mgbe ntụziaka na-mesịrị natara n'aka ahịa mezue dị otú ahụ rụpụta, mmepụta ma ọ bụ nnyefe. Ọ bụla mgbakwunye ihe ịrịba ama iji ga-anabata naanị na ahịa na mmetụta mgbe ndị ọzọ na iji a na-anabata. All ahịa na-dabere na ndị na-eri nke oru, ihe, ụgbọ njem, udu nke ọdabara ụtụ isi na omenala ọrụ, na ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ na utịp ke ụbọchị FSG ekweta na ọdabara ịnye ọnụahịa. FSG mee ikike, na ihe omume nke ọ bụla ihe na-abawanye na ihe ọ bụla nke ya na-akwụ ụgwọ mgbe ndị dị otú ahụ ụbọchị ma ọ bụ pụrụ iche na-abawanye na ahịa ahịa, ma ọ bụghị ịda nke ihe omume nke ike ka ike ma ọ bụ a ọdịda nke presupposed ọnọdụ, ka ịhazie ahịa nkwụnye n'elu mara Ahịa.
5. Order Ji; Kagbuo. Mgbe Asịwo si Order e nabatara FSG, na Order nwere ike ghara etinye ejidere, gbanwetụrụ, kagbuo ma ọ bụ gbanwere enweghị FSG si dere nkwenye. Ke edinam na Asịwo nsị ọ bụla Order na ejidere n'ihi na ihe karịrị iri atọ (30) ụbọchị, Asịwo ga-ahụ maka, na ikwughachiugwo FSG n'ihi na, ihe niile ihe onwunwe, na ọrụ na-efefe n'elu akwụ ụgwọ niile metere site FSG dị ka a n'ihi nke ejidere. Ọ bụrụ na Asịwo akagbu ọ bụla Order, Asịwo ga ịbụ maka ugwo FSG ezi uche kagbuo ma ọ bụ iji mgbanwe ebubo. Dị otú ahụ kagbuo ma ọ bụ iji mgbanwe ebubo pụrụ ịgụnye, ma ọ bụghị nanị na, nsuko Price niile ngwongwo Ẹnam ekese site FSG ka Asịwo, nkwekọrịta Price niile okokụre ibu yiri nkata na-onwunwe nke FSG, ndị ọzọ nile kpọmkwem akwụ ụgwọ niile metere site FSG na n'ókè enweghị ike ike mitigated site na iji ezi uche mitigation mgbalị, na nchekwa ebubo dị ka e depụtara Nkebi nke 8 ndị a okwu nke na-ere. Ke adianade do, ma ọ bụrụ na n'oge Asịwo-akagbu Order FSG nwere ọrụ usoro na-akwanyere ndị Order ọ bụla nke ya ahịa ala, FSG ga-ekwe ka i kpochapụ mmepụta na ngwongwo ndị na-na shop n'ala n'oge Order na-kagbuo, ebe ahụ ibu na okokụre ibu yiri nkata, na ụgwọ ndị asịwo nkwekọrịta price maka otú ahụ na ngwongwo.
6. Ndị ọzọ Akwụ ụgwọ. Asịwo na-ekweta, na ekweta na Nkwekọrịta Price adịghị agụnye emeputa oké receipts ụtụ isi, ahịa ma ọ bụ ojiji ụtụ isi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ anāchi achi, obodo, na mba, ụtụ isi na / ma ọ bụ nnwale ahụ nwere ike ịbụ a na-akwụ na azụmahịa, gwụla ma ma kwetara ede site FSG . All ọzọ nnyefe akwụ ụgwọ ịda site obodo oru nkwekọrịta ga-ibu ọrụ nke Asịwo. Asịwo n'ihu ekweta na niile square ụkwụ ịnye ọnụahịa na-invoiced na ndabere weputara na FSG kwuru. FSG mee ikike akwụkwọ ọnụahịa Asịwo maka ihe ọ bụla na niile na-amaghị surcharges na iche na-akwụ ụgwọ enyocha megide FSG site ya mgbere mgbe e kwuru ụbọchị.
7. nnyefe na nnabata. Nnyefe nke ngwaahịa site FSG ka a ụgbọelu na FOB ebe ga-emekwa nnyefe ka Ahịa; na n'agbanyeghị ihe ọ bụla iji Kama na n'agbanyeghị ma ọ bụ na FSG akwụ ibu, ihe niile ihe ize ndụ nke ọnwụ ma ọ bụ mmebi n'ụzọ na-aga ga-agafe ka Ahịa n'elu nnyefe dị otú ahụ ụgbọelu. Ahịa nwere ike-maka ọ bụla warehousing ụgwọ, demurrage ụgwọ, trucking na mmefu ndị ọzọ mgbe e ma ọ bụ ihe mere ọ bụla na-egbu oge rịọrọ ma ọ bụ n'ihi na mma nke Ahịa n'ofè ndokwa mbupu ụbọchị. Product ọnọ site FSG ga-nyochara site Ahịa maka nonconformity (gụnyere, na-enweghị mmachi, breakage, cracks, scratches, Nsonye nke mba ọzọ ihe onwunwe, na ihe ndị ọzọ nonconformity ma ọ bụ ịghara ịgbaso), ụkọ na ndị ọzọ na njehie, na niile na-ekwu natara ede site FSG n'ime mbụ nke iri (10) ụbọchị mgbe nnata nke a Mbupu na mbụ Mbupu ebe ma ọ bụ n'ihu nhazi ma ọ bụ ire ere ngwaahịa site Ahịa. Mîkayarakede ka a na-azọrọ n'ime ndị dị otú ahụ oge ga-emekwa a waiver nke niile dị otú ahụ na-ekwu site Ahịa, na ndị dị otú ahụ ọdịda ga-emekwa nnabata nke ngwaahịa. FSG ga-enye a ezi uche ohere inyocha boro ntụpọ ma ọ bụ nonconforming ngwaahịa, na, na FSG si nhọrọ na dị ka FSG nanị ọrụ, mmezi, dochie ma ọ bụ nkwụghachi nke price ugwo site na Ahịa ka FSG. Ọ bụrụ na rịọrọ site FSG, na ntụpọ ma ọ bụ nonconforming ngwaahịa ga-laghachiri FSG.
8. Nchekwa ebubo. Ọ bụla dechara iwu na Asịwo ada ada na-anabata nnyefe nke ibu site nnyefe ụbọchị kwuru na FSG Order egosi ga-n'okpuru nchekwa ebubo na a ọnụego nke $ 150,00 kwa crate kwa ọnwa. Ndị a nchekwa ebubo ga-nkwụnye site Asịwo net ụbọchị 30. Ọ dịghị ihe ọ ga-FSG-atụba maka ọ bụla na-akwụ ụgwọ, ụgwọ, na-emebi ma ọ bụ ọnwụ ka ibu ma ọ bụ ihe echekwara nsonye ka a Nkebi nke. FSG kpọmkwem disclaims ọ bụla ibu n'ihi na, ma ọ bụ mmebi n'ihi, nchekwa nke okokụre ngwongwo ma ọ bụ ihe echekwara hereunder n'ụzọ ọ bụla megidere ụlọ ọrụ ụkpụrụ ma ọ bụ kpọmkwem nchekwa chọrọ mata site na FSG ọ bụla ngwaahịa akwụkwọ.
9. Ịkwụ Ụgwọ Okwu. Ịkwụ Ụgwọ okwu maka ihe ọ bụla Order ga-kpọmkwem na akwụkwọ ọnụahịa na kalenda ụbọchị, na-enweghị retainage ma ọ bụ ka na-apụ na-ekwe. Asịwo na ugwo ọrụ agaghi-oyi na asịwo nke nnata nke ịkwụ ụgwọ site ọ bụla ọzọ. Asịwo ga ịbụ maka FSG si akwụ ụgwọ nke collection, gụnyere ma na ọnweghị oke, nwee ezi uche ọka iwu si ụgwọ na ihe omume nke asịwo nke ndabara ma ọ bụ ndị na-abụghị ugwo. FSG mee ikike ghara n'ọdịnihu butekwara ma ọ bụrụ na-adọ ugwo maka tupu butekwara bụghị e natara.
10. Ebe E Si Nweta Okwu. FSG nwere ike, ke naanị ezi uche, na-ekweta na-enye n'aka okwu ka Asịwo. Ọ bụrụ na FSG ọbuọtde ya nhọrọ ajụ nye n'aka Asịwo, FSG agaghi-atụba maka ọ bụla mebiri, ọnwụ ma ọ bụ na-eri ihe ọ bula ka Asịwo. Ọ bụla n'aka okwu bụ isiokwu FSG nọgide ihu ọma nke Asịwo si n'aka. Ọ bụrụ na, FSG nanị ezi uche na mkpebi siri ike, Asịwo si n'aka ma ọ bụ otú ha nweruru ego na-aghọ unsatisfactory, FSG nwere ike ịdọrọ ma ọ bụ gbanwee ya n'aka okwu.
11. Nnyocha. Asịwo ga inyocha ngwongwo n'elu nnata na gwa FSG ede nke ọ bụla na-ekwu na ibu na-nonconforming n'ime iri (10) ụbọchị mgbe nnyefe. FSG ga-ekwe a ezi uche ohere inyocha na ngwongwo, na ịgwọ ọrịa ọ bụla na-ekwu nke ọkọdọhọ na-abụghị ime, tinyere ohere na ngwongwo ma na Asịwo nke ogige, na a nchekwa eweta ma ọ bụ na ọrụ na saịtị. Isiokwu Asịwo ịbịanye aka n'akwụkwọ a confidentiality nkwekọrịta na nnabata na FSG usoro na owuwu nchekwa omume, Asịwo pụrụ ime ndokwa ileta ngwongwo na FSG si n'ichepụta ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, ndị dị otú ahụ nnyocha ga-adịghị egbochi FSG si arụmọrụ. Asịwo jụrụ ọ bụla na-usoro ibu ma ọ bụ ndị na-abụghị sụgharịa okokụre ibu ịda nke ndị dị otú ahụ nnyocha ga-mere na-ede na FSG tupu Mbupu nke otú ahụ na ngwongwo. Ọ dịghị ibu ka e nyeghachi FSG maka n'aka enweghị FSG si tupu e dere nkwenye.
12. Limited Akwụkwọ ikike. FSG enye a mmachi akwụkwọ ikike maka ibu Ẹnam ekese nsonye ka ihe Order. FSG si akwụkwọ ikike okwu na-setịpụrụ a iche iche akwụkwọ ikike akwụkwọ dị na arịrịọ. FSG si akwụkwọ ikike ga-adabaghi na ihe omume ahụ na full ugwo na-adịghị natara maka ngwaahịa na ọrụ n'ime kwekọrịtara okwu nke ire. FSG kpaara ókè nke akwụkwọ ikike, ka nyere Asịwo, ike na a ga gbanwetụrụ n'elu dere ihu ọma nke FSG si President ma ọ bụ Vice President (s). Ọ bụla ọnụ oyiyi bu n'obi gbanwee ihe ọ bụla ẹdude FSG mmachi akwụkwọ ikike ga-asi na unenforceable megide FSG. Extended warranties nwere ike idị na ihe ọzọ na-eri, na bụ isiokwu e dere ihu ọma nke gbazere agbaze nkọwa site FSG si management na / ma ọ bụ oru nnochite anya na FSG nanị ezi uche.
13. Disclaimers. FSG expressly disclaims ọ bụla echiche akwụkwọ ikike MERCHANTABILITY OR mma maka ihe ọ bụla akpan akpan NZUBE ma ọ bụla ọzọ ọrụ OR Ibu BỤGHỊ expressly weputara ITS STANDARD usoro nke akwụkwọ ikike. FSG agaghi-atụba n'ọnọdụ ọ bụla IHE anọ, na-enwe, ndị dị, pụrụ iche ma ọ punitive emebi nke ụdị ọ bụla. Asịwo na ikike na ọrụ banyere ọ bụla ibu ọnọ site FSG, na pụtara ịbụ gahiere agahie, na-ejedebeghị na ndị weputara FSG si Limited Akwụkwọ ikike nyere asịwo. FSG ga-anabata ihe ọ bụla ụgwọ ma ọ bụ efu osụk site Asịwo ma ọ bụ ọ bụla ọzọ, gụnyere ma na ọnweghị oke ọ bụla oru nleeta maka mgbanwe, mwepụ, nnyocha, ule ma ọ bụ echichi nke ọ bụla ibu na-ere site FSG n'okpuru ihe Order ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla nnọchi ngwongwo.
14. S UITAB ILITY. Ahịa bụ nanị maka ịchọpụta na kwesịrị ekwesị na ndakọrịta nke Ahịa si ụzọ, Filiks, aghụghọ na ihe eji na ngwaahịa na kwesịrị ekwesị nke na ngwaahịa ahịa mkpa na ngwa. Annealed iko adịghị mma maka ojiji na ebe kọwara dị ka "ihe ize ndụ" na ụfọdụ ụlọ codes na gọọmenti etiti iwu. Ahịa nwere ibu ọrụ iji nchekwa gbazere agbaze ihe (eg, n'obi iko ma ọ bụ laminated iko) na ize ndụ ebe. FSG nwere site n'oge ruo n'oge na-enye ma ọ bụ na-jụrụ iji nyochaa, ule, nye ihe ọmụma ma ọ bụ ya echiche banyere ngwaahịa ọnọ site FSG, Ahịa si ụzọ, Filiks, aghụghọ na ihe a ga-eji dị otú ahụ na ngwaahịa, ma ọ bụ kwesịrị ekwesị dị otú ahụ na ngwaahịa na a chọrọ ngwa ma ọ dịghị FSG ga-ọrụ ọ bụla, ibu ma ọ bụ ọrụ na-akwanyere thereto ma ọ bụ ka ịgbakwunye otu. Ahịa ga-mgbe niile ịbụ maka ịchọpụta kwesịrị ekwesị dị otú ahụ ozi, nyochaa na ule results, echiche, Filiks, ngwaahịa na ọrụ maka ojiji na Ahịa onwe nhazi na ngwa na maka ịmata na-arụ ka ndị ahịa na-afọ ojuju niile àgwà akara ule, nyocha, amụma, na ndị ọzọ bịara na ule dị mkpa ka obi sie na ahịa si ngwaahịa na ọrụ ga-adị mma, na-anakwere na kwesịrị ekwesị maka n'okpuru end-eji ọnọdụ.
15. mbupu hazie oge; IKE KA IKE. All hotara mbupu schedules bụ ndika na ga adabere n'oge nnata site FSG si Ahịa na ụdi ihu ọma site FSG nke niile n'aka ọmụma. FSG nwere ike ime ka nnyefe na nza ma ọ bụ obere, gwụla ma ma expressly kwetara, na ihe nile dị otú ahụ nza ma ọ bụ obere nwere ike isiokwu nke iche iche invoices nke a ga-akwụ ụgwọ mgbe ruru n'okpuru onye ọ bụla akwụkwọ ọnụahịa na enweghị banyere ụdi deliveries. Ọ dịghị FSG ga-atụba maka ọ bụla ugwo maka odida izute mbupu schedules ma ọ bụrụ na FSG ka kpọmkwem kwetara dị otú ahụ ntaramahụhụ na a ide-aka site uweojii nke FSG. FSGs ga-dara iwu maka ihe ọ bụla mebiri mere ka a n'ihi nke ọ bụla na-egbu oge na nnyefe ma ọ bụ ọdịda napụta ruru ka ọ bụla na-akpata n'ofè FSG ezi uche akara, tinyere, na-enweghị mmachi, Act nke Chineke; omume ọ bụla nke Ahịa; mgbochi ma ọ bụ ndị ọzọ ndị ọchịchị eme ihe, iwu ma ọ bụ arịrịọ; ọku; mberede; iku; jiri nwayọọ; agha; ntịme; iju mmiri; igbu oge njem; ma ọ bụ enweghị ike inweta mkpa ọrụ mmanye, ihe ma ọ bụ n'ichepụta ụlọ ọrụ na omenala ahịa ( "ike ka ike Ihe"). Na ihe omume nke ọ bụla ike ka ike Omume, FSG nwere ike ịgbatị na ụbọchị nke nnyefe n'ihi a oge hà oge furu efu site nke ike ka ike Omume ma ọ bụ jiri nri zoro aka na Nkebi 2. ahịa nnabata nke ngwaahịa mgbe naputa ga-emekwa a waiver nke niile na-ekwu maka mebiri ọ bụla dị otú ahụ na-egbu oge ma ọ bụ ike ka ike Omume. Oge na nnyefe nke ọ bụla ọtụtụ ma ọ bụ nkeji nkeji ma ọ bụ ihe omumu nke nri zoro aka na Nkebi nke 2 agaghị dochie Ahịa nke Ahịa Chineke chọrọ ịnabata fọdụrụ deliveries. Products Ẹnam ekese na ebe n'ime USA nwere ike packaged na ígwè racks ma ọ bụ bungie racks nke FSGs. All otú ahụ racks bụ ga-anọgide na ihe onwunwe nke FSGs. Ahịa ga-eji ezi uche na-elekọta na ebutu, itinye na iji racks. The racks na-eji site na Ahịa nanị na njikọ na na na ikwado nnyefe nke FSG ngwaahịa na n'ihi na ọ dịghị ndị ọzọ, gụnyere, na-enweghị mmachi, yiri nkata nchekwa na ndị ọzọ na nchekwa ma ọ bụ Mbupu nke Ahịa ma ọ bụ ndị ọzọ 'na ngwaahịa. Ahịa agaghị agbanwe, na-ere ma ọ bụ n'okpuru ihe encumbrance ọ bụla dị otú ogbe. Ahịa bụ mee racks nyere ahịa dị ka FSG mgbake na maka ihe ọ bụla ọnwụ ma ọ bụ mmebi nke racks. FSG ga-isiokwu na-ana Ahịa maka nnọchi uru nke ọ bụla ogbe bụghị mere maka mgbake site FSG, furu efu ma ọ bụ mebiri emebi. N'elu a arịrịọ nke a FSG, Ahịa ga-ekwe mmadụ kpọrọ ndị FSG ohere ahịa si ụlọ ọrụ n'oge kwesịrị ahịa awa iji nyere ndị dị otú ahụ iji chọpụta na ọnụ ọgụgụ na ọnọdụ nke racks na Ahịa nwe na-agbake onwunwe nke racks maka abamuru nke FSGs . Ọ bụrụ na mgbake nke onwunwe nke racks na-achọ site na a FSG, Ahịa ga na ya na-eri na-ekwenyere FSGs na ha designees n'ihe niile.
16. Ukara Iwu. Nke a nkwekọrịta, na bụla Order, a ga-achịkwa, na weere dị ka, iwu nke China.
17. Niile Agreement. FSG si e kwuru, ndị a okwu nke na-ere, FSG si Order nkwenye, Pro Forma, FSG si Limited Akwụkwọ ikike (ọ bụrụ na ọdabara, na dị ka enyere site na FSG), na ihe ọ bụla yana akwụkwọ weghaara hereto site FSG, nwere zuru ezu na dum nkwekọrịta n'etiti ndị ọzọ dị ka na isiokwu okwu hereof, na-anọchi na supersedes ọ bụla tupu ma ọ bụ contemporaneous nkwukọrịta, oyiyi, ma ọ bụ nkwekọrịta, ma onu ma ọ bụ e dere, na-akwanyere ndị dị otú ahụ isiokwu okwu.
Ịmatakwu banyere anyị ọhụrụ pịa ntọhapụ ma ọ bụ ihe, ime ọsọ ọsọ gị email address na n'okpuru oghere na pịa "nyefere" button: